Esi iPad si Iweghachite ọnọdụ
2 Ụzọ na-esi gị iPad si Iweghachite ọnọdụ
My iPad araparawo mgbake mode mgbe m emelitere ya ka ọhụrụ iOS 9! M na-akpọ Apple ma nwetara enweghị ozi ọma. Achọghị m ka m nye elu. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ezi ndụmọdụ, biko, ka m mara. Ekele.
O yiri ka mgbe emelite iOS, iPad mgbe niile stucks na mgbake mode. Nke a abụghị nanị ọnọdụ nke iPone stucking na mgbake mode. Mgbe ọ bụla ị na-agbalị iji tọgharịa gị iPad paswọọdụ, i nwere ike na-esi gị iPad n'ime Iweghachite ọnọdụ kwa. Echegbula onwe gị banyere nke ahụ. E nwere basica abụọ dị mfe ụzọ i nwere ike na-agbalị iji nweta gị iPad si Iweghachite ọnọdụ. Họrọ onye nke ahụ dị mma maka gị.
Ngwọta 1: Get iPad si Iweghachite ọnọdụ site Iweghachi Ọ na-Factory Ntọala
Ngwọta 2: Get iPad si Iweghachite ọnọdụ na-enweghị Iweghachi (Ọ dịghị Data Loss)
Atụmatụ: Olee otú itinye iPad n'ime Iweghachite ọnọdụ
Ọ bụrụ na gị iPhone rapaara na Iweghachite ọnọdụ na unu adịghị cheta adịkwa niile data na gị iPad (iOS 9 akwado), ị nwere ike iji gị iTunes iweghachi gị iPad n'ime ụlọ ọrụ ntọala.
Nzọụkwụ 1. Jiri eriri USB jikọọ gị iPad na gị na kọmputa na-agba ọsọ iTunes.
Nzọụkwụ 2. Mgbe iTunes achọpụta rụọ gị iPad, ọ ga na-echetara gị na gị iPad bụ na mgbake mode na mkpa ka ị weghachi ya. Ị dị nnọọ mkpa pịa "Weghachi"
Cheta na: Nke a bụ Apple si offcial ụzọ dozie nsogbu mgbe gị iPhone araparawo Iweghachite ọnọdụ. -Eme ihe n'eziokwu, m atụ aro ka ị na-agbalị otú a n'ihi na ihe niile gị data ga-ihichapu. Ị nwere ike na-agbalị na-esonụ ụzọ. Ezie na ọ pụrụ ewe gị 2 nkeji, ma ị ga-gị iPhone data.
Otú a ga-enyere gị wepuÚ gị iPad si Iweghachite ọnọdụ na-enweghị na-eweghachiri gị iPad, nke pụtara na a ga-ọ dịghị data ọnwụ mbipụta. Kama ị ga-akpa ibudata na wụnye software mkpa - Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery). Ọ ga-esi gị iPad si Iweghachite ọnọdụ mfe na idozi njehie mgbe ị na-eweghachiri gị iPhone.
Nzọụkwụ 1. Download Wondershare Dr.Fone maka iOS na wụnye ya na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPad gị na kọmputa na iji eriri USB na ẹkedori Wondershare Dr.Fone maka iOS. Nke a na usoro ga-chọpụta gị iPad na-agwa gị Malitegharịa ekwentị ya.
Nzọụkwụ 3. pịa 'rụkwaa Sistem' n'elu nri nke isi window. Na-eme ihe ọ na-agwa gị ka ị na-eme: download femụwe> Họrọ iOS femụwe> idozi sistemụ. Na sekọnd ole na ole, ị pụrụ ịhụ gị iPad (gụnyere iOS 9 iPad) bụ nke Iweghachite ọnọdụ na rụrụ kwesịrị.
Atụmatụ: Olee otú itinye iPad (iOS 9) n'ime Iweghachite ọnọdụ
Nzọụkwụ 1. gbanyụọ gị iPad.
Nzọụkwụ 2. N'ịbụ ala Home button na Ike button na gị iPad n'otu oge. Mgbe ị na-ahụ Apple logo egosi, hapụ Ike button na na-na na ịpị Home bọtịnụ.
Nzọụkwụ 3. Launch iTunes na jikọọ na gị iPad gị na kọmputa site na iji eriri USB na ruo mgbe ị na-iTunes anya sị gị iPad bụ na mgbake mode. Ị ga-ahụ na ihuenyo gosiri n'elu na gị iPad.
Ndị ọzọ Hot Isiokwu Ị nwere ike inwe mmasị
Olee otú izipu ozi ederede site iPad
Ike izipu ma ọ bụ Anata Text - Idozi Ọ
Naghachi ehichapụ Facebook Ozi si iPad
Idozi 'Ọ dịghị Enough Sapce on iPhone iji weghachi ndabere'
Nyefee ozi ederede site na iPhone 6 ka Mac
Idozi 'iPhone gaghị agbanye'
Olee otú Naghachi ehichapụ Safari Ibe edokwubara on iPad
> Resource> iPad> iPad Nọgidesiri na mgbake mode mgbe Update - Idozi Ọ